Oromo Free Speech: NAMNI OROMUMMAAF YAADU GALATA QABA!
Najiib Zannuun irraa | Sadaasa 23, 2014
Namni Oromummaaf jedhee hadoodu, namni Oromummaaf jedhee falmatu, namni Oromummaaf jedhee qabsaa’u nama mataa isaatiif osoo hin taane, sabasaatiif dhaamotu. Guyyaa tokkollee ta’u namni sabaaf yaadee waan dhimma saba isaa dalage galata guddaa qaba. Garuu nama akkasii sanitti gufuu ta’uun hamilee wal cabsuudha. Wal komachuu, wal arrabsuufi maqaa wal xureessuun, garayyuu nu hin geessu! Yoo walii gallee, wal dhageenyee, wal kabajnee, wal dandeenye, wal jala bobbaane qofa bakka yaadne geenya. San ta’uu baannaan garuu wanni tarru hin jiru. Xumura irratti jecha Dr. Sheek Mohammed Rashaad Abdullee (Rabbi Rahmata Haa Godhuufii) jedhe tokkoonin xumura.
“Manni yoo qaqal’iin qajeelte, yoo dagaleen tolte, yoo utubaan qajeelee tole,manni ni tola. Hoggaa taan ni
inni itti jallate san, mogoleetti suuta dhidhiibee if duuba deebisa. Ammas akka bakka dhawameen saniin hin laafanne,muka qajeelfame kana muka qajeelaa lama jidduu kaayee yookaa dhaabee waliin dagalcha.”